LG သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်နောက်ထပ် Google Pixel ကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည် Androidsis
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Google ကုမ္ပဏီသည် Nexus စမတ်ဖုန်းများကို Pixel နှင့် Pixel XL အသစ်ဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည်။ ကန ဦး ဝေဖန်မှုများရှိခဲ့သော်လည်းလက်တွေ့တွင်ကုမ္ပဏီသည်သူတို့နေရာတိုင်း၌သိသာထင်ရှားသည့်အောင်မြင်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ရောင်းဖို့သူတို့ကိုထားပါ။
ထို့ကြောင့်လပေါင်းများစွာကြာသည်အထိကောလဟာလသတင်းများထွက်ပေါ်နေသည် Google သည် Pixel အသစ်သုံးမျိုးဖြင့်အလုပ်လုပ်သည် ဒီ ၂၀၁၇ ရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းမှာအလင်းကိုမြင်ရလိမ့်မယ်။ အခုနွေရာသီရဲ့တံခါးပေါက်တွေမှာသူတို့ကသူတို့ရဲ့ကုဒ်နံပါတ်တွေ (သို့) ဘာတွေစသဖြင့်ဒီ terminal အသစ်တွေအကြောင်းပိုသိလာပြီလား တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ LG မှထုတ်လုပ်နိုင်သည်.
LG က Google Pixel 2017
ကောလာဟလများနှင့်အစောပိုင်းပေါက်ကြားမှုများကဲ့သို့မကြာခဏဖြစ်သကဲ့သို့အဘယ်အရာကိုမှအတည်မပြုရသေးပါ။ ဒီအကြောင်းကိုအမြဲသတိရပြီးမနေ့က Pixel XL ရဲ့ဆက်ခံသူ Muskie ကိုဖျက်သိမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကဲ့သို့ Pixel ထုတ်ကုန်နှစ်ခုနှင့်အတူသူတို့၏အမြဲတမ်းတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းကိုစတင်ခဲ့သည်။ ဒီနှစ်ကုန်
ဒီ Google Pixel မော်ဒယ်လ်နှစ်ခုကဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်တုံ့ပြန်လိမ့်မယ် Walleye နှင့် Taimen codenamesနှင့်နှင့်အညီ ထင်မြင်ချက် အထူးပြုဒစ်ဂျစ်တယ်အလတ်စား 9to5Google ၏, ၎င်းကိရိယာများ၏အကြီးဆုံးဖြစ်သော Taimen ကို LG မှတည်ဆောက်လိမ့်မည်.
ဒီထင်မြင်ချက်ကိုသက်သေပြနိုင်ဖို့အတွက် 9to5Google ဟာ bug ကိုရည်ညွှန်းတယ် Android Issue Tracker အတွက် မတ်လက LG ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ကတောင်ကိုရီးယားကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူနှင့် Taimen စက်၏ဆက်နွယ်မှုကိုစမ်းသပ်မည့်သူ။ Google မှ ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး က၎င်းအမှားအား Android> Partner> External> LGE> Taimen> power သို့ထည့်သွင်းရန်တောင်းခံခဲ့သည်။ LGE သည် LG ထုတ်ဝေမှုနှင့်အမြဲတမ်းဆက်သွယ်မှုရှိသည်။
အကယ်၍ ဤနှုတ်ယူခြင်းသည်အမှန်ဖြစ်ပါက Nexus5နှင့် Nexus 5X တို့၏ထုတ်လုပ်သူများသည်အနည်းဆုံး Google ၏ထုတ်ကုန်အသစ်တစ်ခုကိုထုတ်လုပ်ရန်ပြန်လာလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ Pixel XL ၏ ၂၀၁၇ ထုတ်ဝေမှုတွင်ဆက်ခံခြင်းဖြစ်သည်။ သေးငယ်သော Walleye မော်ဒယ်ကိုထုတ်လုပ်သူသည် HTC ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုစလုံးသည်ထိုအချိန်က ၂ နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » LG သည်လာမည့် ၂၀၁၇ Google Pixel ကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်
Moto E4 Plus အသစ်အကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှ နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်စျေးနှုန်း